Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị na-egwu bọọlụ Scottish Billy Gilmour Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Football with the nickname “Onye Nlereanya ọhụrụ”. Anyị Billy Gilmour Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Facts na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ndụ na mbilite nke Billy Gilmour.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike Gilmour ịme igodo ụzọ yana anya ya nwere nnukwu ebumnuche.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Billy Gilmour's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Billy Gilmour Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Midfielder Billy Clifford Gilmour a mụrụ na 11th ụbọchị nke June 2001 na Glasgow na Scotland. Ọ bụ onye mbụ n'ime ụmụ abụọ amụrụ nne ya, Carrie Gilmour na nna ya, Billy Gilmour Sr.
Ndị nne na nna Billy Gilmour Carrie Gilmour na Billy Gilmour Sr. Image Ebe E Si Nweta: Twitter.
A zụlitere agbụrụ ndị agbụrụ Scotland nke agbụrụ ọcha na-amachaghị amị n'obodo Ardrossan na North Ayrshire, Scotland ebe o toro na nwanne ya nwoke nke nta Harvey Gilmour.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke Billy Gilmour tolitere na Ardrossan na North Ayrshire, Scotland.
Na-etolite na Ardrossan, bọọlụ bụ ọrụ wepụtara mkpali kachasị mma na-eto eto Gilmour dịka nwatakịrị.
Ya na nne ya na-agakarị na azụ ezinụlọ ya mgbe nna ya ochie na-ekpe okpukpe na-akpọrọ ya gaa egwuregwu na ogige n'ogige izu ụka niile.
Billy Gilmour Nkuzi na Ulo Oru:
Dika Gilmour nwere mmasi banyere football, o nwere akwukwo guru akwukwo na Stanley Primary School na Ardrossan ma mechaa gaa Grange Academy di na Kilmarnock maka akwukwo ulo akwukwo ya.
Nwa agbọghọ Billy Gilmour (2nd n'aka ekpe) ya na ndị enyi nọ n'oge ụlọ akwụkwọ praịmarị ya. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Latterlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nke ikpeazụ bụ n'eziokwu, formancelọ Akwụkwọ Nlekọta nke Skọtland (SFA) mere iji hụ na mmepe nke egwuregwu ụmụaka na-aga aka na mmuta na mmelite nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Billy Gilmour Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
Tupu njikọta Gilmour na formancelọ Akwụkwọ Nlekọta nke Scottish Football Association (SFA), ọ nwere akụkọ akụkọ bara ụba nke ịgba bọl na mmepe mmepe n'ọtụtụ ebe ọzụzụ gụnyere Mini Kickers na Tass Thistle.
Ọ bụ naanị mgbe Gilmour mechiri afọ 10 dị afọ ka ọ kwalitere radar nke SFA nke mechara weta ya na Grange Academy na Kilmarnock ma nyochaa ya na klọb bọọlụ Rangers ebe ọ nọrọ ọtụtụ ọrụ ntorobịa ya.
Billy Gilmour Bio - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Rangers, Gilmour na-ebili site n'ọkwa ka ọ bụrụ onye kachasị mma na otu na klọb.
Agbanyeghị na nwa afọ iri na ise na iri na isii sọ mpi na ụmụ nwoke ndị gbara afọ iri na ise, ọbụnakwa zụọ ya na ndị otu Rangers, ọ kabeghị ahụ na klọb ahụ.
Onye Gilmour na-achọkarị achọ karịa ebumnuche ya site na ịrọ nrọ nke ịbụ onye kachasị mma n'ụwa, na-abịa na ndị Chelsea kwuru na ha na-eti mkpu "anyị nwere naanị ụmụ gburugburu ebe obibi kachasị mma, bịa, ma nwee mgbanwe nke ịbụ onye a ma ama".
Nrọ dị ukwuu na Rangers FC: nrọ Billy Gilmour buru oke ibu maka Rangers FC ịnabata.
Billy Gilmour Biography Eziokwu - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
Chelsea nwetara ọrụ nke Gilmour na July 2017 maka ụgwọ ezi uche wee gaa n'ihu ịnwale ikike ọrụ ya dị oke elu na ndị otu egwuregwu U-18 tupu ya enye ya nkwekọrịta ọkachamara mbụ na July 2018.
Billy Gilmour bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara ya na Chelsea na July 2018.
Kemgbe ahụ, ndị na-eso ụzọ soro Gilmour n'okpukpe iji hụ ma nwatakịrị ahụ ọ ga-abụ ihe ịtụnanya ma ọ bụ jiri ọrụ mgbazinye ya rụọ ọrụ tupu ya ewee ree ya.
Agbanyeghị, Gilmour nwere ihe ọdịmma ya na ya, ọkachasị n'oge ugbu a onye njikwa Frank Lampard gbadoro ụkwụ na iji ikike ichebe agụmakwụkwọ nke Blues na-akụ.
Kemgbe Frank Lampard ghọrọ onye nchịkwa Chelsea, ụlọ ọrụ ahụ na-eji ikike agụmakwụkwọ dị ka Billy Gilmour na Tammy Abraham eme ihe nke ọma.
Mkpebi Lampard ahụgoro Gilmour ka etinye ya na asọmpi tupu oge Chelsea megide Dublin na July 2019 yana edepụtara ya dị ka onye na-anọchite anya ya n'oge njedebe nke 2019 UEFA Super Cup megide Liverpool.
Na-eso Gilmour's Premier League nke izizi megide Sheffield na August 2019, o zuru ezu ịmara na ọ nọ na ịrị elu meteoric na ọ ga-akwụsị na ihe ọ bụla iji bụrụ nke kachasị mma. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Billy Gilmour Life Life - Enyi nwanyị, Nwunye, Childrenmụaka?
Onye ọ bụla na-egwu egwuregwu nke nwere ọmarịcha dịka Gilmour nwere ike ịdị na - kacha mma - ọ lụrụ di ma ọ bụ njọ, alụghị di. Kedu ụzọ ọ bụla ụkpụrụ ndụ ịhụnanya nke mmekọrịta mmekọrịta Gilmours si kwuo, a na-ele ya anya dịka onye na-alụbeghị di na nwunye n'oge ọ na-ede akwụkwọ, ọ nweghịkwa ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị n'alụghị di.
Onye na-egwu egwuregwu bọọlụ na-aghota na ịbụ onye na-adọrọ adọrọ karịrị ihe dị mma n’anya mana igwu egwu dị mma. N'ihi ya, a na-etinye ego na oke iji mee ka ọrụ ya zuo oke n'ehihie ka ọ na-agụ ụwa ọhụụ nke ohere ịgba bọọlụ.
Billy Gilmour enwere ike ghara inwe enyi nwanyị n'oge edere.
Billy Gilmour Ndụ Ezinụlọ:
Egwurugwu egwuregwu Gilmour mara mma bụ ezinụlọ na-agba ume. Anyị ewetara gị nkọwa gbasara ndụ ezinụlọ ya.
Banyere nne Billy Gilmour: Carrie Gilmour abụghị naanị mama Gilmour kamakwa onye na-egwu egwuregwu. Ọ banyere na agụụ Gilmour maka ịgba bọọlụ site na itinye arịrịọ ya ka ya na ya gbaa bọọlụ.
Ọganihu ngwa ngwa ruo ụbọchị, Carrie dị mpako nke ihe ndị Gilmour rụzuru ma na-arụsi ọrụ ike n'okwu metụtara ọdịnihu nke Midfield na egwuregwu ahụ.
Billy Gilmour na nne ya Carrie. Ebe E Si Nweta Foto: Twitter.
Banyere nna Billy Gilmour: Billy Gilmour Sr bụ nna Gilmour. Ọ na-eje ozi na Royal Navy n'oge ndụ nwata ahụ ma nwee akụkọ ihe mere eme nke ịgba bọl maka Ardrossan Winton Rovers.
N'ihi nna na-akwado ya, Gilmour na-abụkarị onye ọbịa na ime ụlọ mgbakwasa otu, mmepe nke mekwuru ka ọ nwee ike ịgwakọta na ịkọwa ndị okenye dị ka nwata.
Banyere ụmụnne nwanne Billy Gilmour: Gilmour nwere naanị obere nwanne na-ahụ n'anya bọọlụ akpọrọ Harvey.
Nwanne nwanne nwoke nke na-achọ ịbụ nwa-nwatakịrị football-dị ka Gilmour, enwebeghị ihe kariri afọ 2 ịrụ ọrụ na Kilmarnock FC yana ọmụmụ ihe na Grange Academy SFA Performance School n'oge edere.
Billy Gilmour na nwanne ya nwoke Harvey. Ebe E Si Nweta Foto: Twitter.
Banyere ndị ikwu Billy Gilmour: Onu ogugu nke ezi ulo nke Gilmour nke gunyere nne na nna ya, na umu nna ya, nna nna ya, umu nwanne nna ya na umu nwanne nna ya ka achoputaghi ha n'oge ede.
Billy Gilmour Ndụ Nke Onwe:
You maara na Gilmour gosipụtara àgwà ọma mara mma nke gụnyere ịdị umeala n'obi, ilekwasị anya na ọgụgụ isi nke uche? Tụkwasị na nke Gilmour bụ onyinye ya igosipụta onwe ya na ike iso ndị ọzọ nwee njikọ.
Nwatakịrị na-ekwe nkwa nke Gemini Zodiac na-eduzi na-ekpughere nkọwa gbasara ndụ onwe ya.
Ihe ndị Billy Gilmore nwere na ihe omume ntụrụndụ bụ foto, igwu egwuregwu vidio, ige egwu, ikiri ihe nkiri na iwepụta ezigbo oge iji soro ndị enyi na ezinụlọ ya.
Billy Gilmour nwere ezigbo oge yana egwuregwu vidiyo.
Billy Gilmour Web Ndụ:
N’ịga n’ihu ụdị ndụ Gilmour, ọ nwere obere uru ọsụsọ mara ọfụma ebe a ka na-enyocha uru ya n’oge a na - ede bio, n’ekele ịbụ onye na - akwụ ụgwọ obere ụgwọ.
N'ihi nke a, onye amamihe bọọlụ nke mere emume ncheta afọ 18 ya na June 2019 enweghị ike ibi ndụ okomoko nke ndị na-emefu nnukwu ego na ụgbọala na ụlọ iji gosipụta.
N'agbanyeghị na ọ maara etu esi agbanwe Gucci n'etiti ụdị uwe ndị ọzọ dabara n'ụdị ya.
Billy Gilmour na-agbanwegharị maka uwe Gucci n'oge ememe ncheta ọmụmụ 18 nke afọ. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Eziokwu Billy Gilmour:
N'ịchịkọta akụkọ gbasara nwata na akụkọ banyere Billy Gilmour, ebe a bụ akụkọ banyere ọtụtụ ama banyere ya.
Okingụ sịga na ị drinkingụ ihe ọ drinkingụ :ụ: Gilmour bụ onye na-akwado mgbatị ahụ na ịdị mma. N'ihi ya, ọ tụgharịrị megide ihe ọ bụla na-egbochi ịdị mma ị smokingụ sịga na omume rụrụ arụ ị ofụbiga mmanya ókè.
Religion: Kpakpando ahụ na-ebili adịghị abịa dịka okpukperechi mgbe a na-agba ajụjụ ọnụ, a hụbeghịkwa ya ka o na-eji pendants na-ekwu okwu na njikọ okpukpe ya. Yabụ na enweghị ike idozi ya kpamkpam ma ọ bụ onye kwere ekwe ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ezigbo agadi Frank Lampard: Know maara na amụrụ Gilmour ụbọchị atọ tupu Frank Lampard bịanyere aka na Chelsea na 2001? Na mgbakwunye, Gilmour toro Lampard ma na-enwe olile anya ịmaliteghachi ihe ịga nke ọma ya na Chelsea.
Achọpụtala Frank Lampard na ihe omume pụtara ìhè n'oge nwata Billy Gilmour rue taa. Ebe E Si Nweta Foto: Twitter
Ogbugbu: Gilmour enweghị akara egbugbu n'oge a na-ede ihe. Ọnụọgụ ndị ahụ na-akwado ya ịghara inweta nka ọ bụla n'ihi na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị etiti ọ na-agụ akwụkwọ ugbu a enweghị akara.
Ihe kpatara ya aha otutu: A kpọrọ Gilmour “New Modric”Site na ndi oru nta akuko n’ihi ikike nke oru ya iji mee ka igodo buru uzo ma mgbe nsogbu di ka onye ibe ya na Croatian.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Billy Gilmour Childhood Akụkọ ya na Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
Billy bu nwoke nwere mmasị nwoke. Nu ahughi nke ahu?
Billy Gilmour nwere ma ọ bụ nwee nna nna onye nọ na Rhodesian, ndị uwe ojii Britain South Africa na 1950